RW Rooble ayaa kulan xasaasi ah la qaatay Qoorqoor kadib markii uu ka biyo diiday… – Hagaag.com
RW Rooble ayaa kulan xasaasi ah la qaatay Qoorqoor kadib markii uu ka biyo diiday…
Posted on 15 Abriil 2021 by Admin in National // 0 Comments
Ra’iisal Wasaaraha Somalia, Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan xasaasi ah la qaatay Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor).
Wararka ayaa sheegaya in Ra’iisal Wasaaraha uu u yeeray Madaxweynaha Galmudug, ka dib markii uu Qoorqoor ka biyo diiday dalab uga yimid Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha Somalia ayaa Qoorqoor ka dalbaday inuu taageero qaraarkii Golaha Shacabka uu Isniintii ku meelmariyay Sharciga gaarka ah ee jiheynta doorashooyinka dalka, kaasoo Hay’adaha Dowladda Federaalka u ogolanaya inay xafiiska sii jooggaan labada sano ee soo socota.
Madaxweynaha Galmudug ayaa horaantii toddobaadkan sheegay inaanu aqoonsanayn wax la yiraahdo muddo kordhin, dalkuna uu doorasho aadi doono.
Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Galmudug, Cumar Axmed Saney (Cumar Shiddo) ayaa mar sii horeysay waxba jiraan ku tilmaamay warqad ka soo baxay Villa Somalia, laguna baahiyay Warbaahinta Dowladda, iyadoo markaasi lagu sheegayay in Dowlad Goboleedyada Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Maamulka Gobolka Banaadir ay taageereen go’aanka Golaha Shacabka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in kulanka Rooble iyo Qoorqoor sidoo kale looga hadlayo weerar ay qorsheyneyso Dowladda Federaalka inay ku qaaddo hoyga uu Degmada Hodan ka degay Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, General Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon).
Wararka ayaa intaa ku daraya in Villa Somalia ay dooneyso in la soo xiro Taliyihii Booliska Gobolka Banaadir, oo Isniintii is hortaag ku sameeyay kulan ay Xildhibaanada Golaha Shacabka ku lahaayen Xaruntooda Villa Hargeisa, halka Madaxweyne Qoorqoor uu ka soo horjeedo in ninkaasi la weeraro.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xalay darajadii ciidanimo iyo wixii xuquuq ahaa uu lahaa ka xayuubiyay Saadaq Joon.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, General Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa maalintii Isniinta xil ka qaadis ku sameeyay Saadaq Joon, wax yar uun ka dib markii uu hakiyay kulankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ku meelmariyeen Sharciga gaarka.
Arrimahan ayaa waxay imaanayaan, xilli uu soo xoogeysanayo cadaadiska Villa Somalia uga imaanaya Beesha Caalamka.